बाढीपहिरोका कारण देशभर कहाँ कहाँ छन् सडक अवरोध ? - Fastest News Nepal
२०७८ कार्तिक ११ गते, बिहीबार १२:२०
बाढीपहिरोका कारण देशभर कहाँ कहाँ छन् सडक अवरोध ?
२०७८ असार १८ गते, शुक्रबार ०२:५७
फास्टेस्ट न्युज नेपाल, अषाढ – १८ ,काठमाडौँ – अविरल वर्षाको कारण विभिन्न क्षेत्रमा बाढी पहिरोले जनजीवन अस्तव्यस्त बनाएको छ। ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका-६ टिकाभैरवस्थित भैँसे खोलामा अविरल वर्षाको कारण बिहीबार बिहान पहिरो जाँदा कान्ती लोकपथ अवरोध भएको छ। मोरङको रतुवामाई नगरपालिका-३ चौकीघाटस्थित झापा मोरङ जोड्ने रतुवा खोलामा बनाएको पुल बिहीबार साँझ पानीले माटो कटान गर्दा सवारी आवागमनमा अवरोध भएको छ।
यसैगरी, नवलपरासी (पूर्व), गैंडाकोट नगरपालिका-१० भैसाखोरीस्थित पूर्वपश्चिम राजमार्गमा पुल निर्माणको लागि बनाइएको डाइभर्सन अविरल वर्षाको कारण पानी भरिन गई बिहीबार बिहान भत्किँदा राजमार्ग अवरोध भएको छ। यसैगरी, चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका-६ नारायणगढ-मुग्लिन सडकको चारकिलो र पाँचकिलो भन्ने स्थानमा अविरल वर्षाको कारण शुक्रबार बिहान पहिरो जाँदा सडक अवरोध भएको छ। त्यस्तै इच्छाकामना गाउँपालिकाकै-७ हरिपुर खोलास्थित जखडीमाई-सिमलधाप जोड्ने निर्माणाधिन पक्की पुल अविरल वर्षाको कारण बिहीबार दिउँसो आएको बाढीले बगाउँदा पूर्णरुपमा क्षति भएको छ।
यस्तै, बाजुरा, बुढीगंगा नगरपालिका-२ ताप्रीसेरा देखी सोही नगरपालिका-६ बार्जुगार्डसम्म विभिन्न स्थानमा बिहीबार बिहान पहिरो जाँदा साँफे-मार्तडी सडक अवरुद्ध भएको छ। पहिरोका कारण अवरोध भएको सडक खुलाउन नजिकको प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको प्रहरीले आवश्यक पहल गरिरहेको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ।
आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा पूँजीगत खर्च लक्ष्यको आधा भन्दा कम